Maayarka Laascaanood Oo Lagu Eedeeyay In Uu Lunsaday Raashin Caawimo ah Oo Ay Soo Bixiyeen Maayaradda Hargaysa, Berbera iyo Gabiley | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Maayarka Laascaanood Oo Lagu Eedeeyay In Uu Lunsaday Raashin Caawimo ah Oo Ay Soo Bixiyeen Maayaradda Hargaysa, Berbera iyo Gabiley
Laascaanood (SDWO.com): Dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaaladda Laascaanood ayaa maanta sameeyay mudaharaad ay kaga cabanayeen raashin caawimo ah oo loogu tall-galay dadka abaartu hayso iyo kuwa danyarta ah oo ay sheegeen in maayarka Laascaanood leexsaday.
Mudaharaadkan ay dhigeen dadweynaha danyarta oo ay ka hor dhigeen xarunta dawladda hoose ee Laascaanood oo la sheegay in uu maayarku ku xeraystay bakhaaro raashinkaasi caawimadda ah oo ay soo bixiyeen maayaradda magaalooyinka Hargaysa, Berbera iyo Gabiley.
Waxaanay dadweynihii halkaasi mudaharaadka ka dhigay oo boqol ahaa ay sheegeen in maayarka magaaladda Laascaanood Cismaan Saleebaan Jamac iyo xubno ay isku xulafo yihiin oo ka tirsan golaha degaanka Laascaanood ay iyagu qoondaysteen in ay leexsadaan raashinkaasi caawimadda ah ee loogu tallo-galay dadka abaartu hayso iyo kuwa danyarta ah ee ku nool magaaladda Laascaanood.
Qaar ka mid ah dadweynihii danyarta ahaa ee maanta isugu soo baxay mudaharaadka cabashadda ah oo ay ka hor dhigeen xarunta dawladda hoose ee Laascaanood ayaa ku qaylinayay erayo ka dhan ah maayarka iyo xildhibaanada ay ku eedeeyeen in ay doonayaan qorshaha ay ku musuq-maasuqayaan raashinkaasi.
Dadweynahaasi oo boqolaal qof ahaa oo u badan dumar iyo caruur ayaa muddo dhawr saacadood ah waxay mudaharaadkooda cabashadda ah la hor taagnaayeen xarunta dawladda hoose ee Laascaanood.
Hase yeeshee dadweynahaasi ayaa markii danbe waxaa xoog ku kala dareeriyay ciidamadda booliska oo rasaas ay kor u ridayeen u isticmaalay, iyadoo markii danbe ay boolisku ku guulaysteen in ay kala dareeriyeen dadkaasi.
Dhinaca kale maayarka magaaladda Laascaanood Cismaan Saleebaan Jaamac, oo aanu caawa isku daynay in aan la xidhiidho si aan wax uga waydiino waxa uu kaga jawaabayo cabashadda iyo eedahay ay dadka danyarta ah ka soo yeedhay ayaanay noo suurto-gelin, kadib markii uu telefoonkiisa naga qaban waayay.
Si kastaba ha ahaatee, cabashadan ka soo yeedhay qoysaska danyarta ah ee ku nool Laascaanood ayaa u muuqanaysa mid fadeexad iyo ceeb ku ah maayarka Laascaanood, kaasi oo sida ay dadweynahaasi sheegeen hunguri ka galay in uu lunsado raashinkaasi caawimadda ah ee ay dadka tabaalaysan ugu soo deeqeen maayaradda dhigiisa ah ee magaalooyinka Berbera, Hargaysa iyo Gabiley.
Waxaanu dhawaaqa danyartu nuqsaan ku yahay Cismaan Saleebaan Jaamac, maayarka Laascaanood, kaasi oo halkii xaqqa loogu lahaa in uu caawiyo bulshadiisa uu masuulka ka yahay ee soo dooratay, in taa bedelkeedda uu bakhaaro ku xeraystay caawimadii ay maayaradda gobollo kale u soo direen danyarta reer Laascaanood.